Labaduba way yaraadeen oo weynaadeen, Trump wuxuu diyaarinayaa ficilkiisa soo socda
Labadaba way yaraadeen oo weynaadeen, Trump wuxuu isu diyaarinayaa ficilkiisa soo socda
Madaxweynihii hore wuxuu ka hadlayaa Shirweynihii Jamhuuriga ee North Carolina Sabtidii markii uu dib u bilaabay khudbadaha iyo isu soo baxyada siyaasadeed. xafiiskiisa ku yaal Trump Tower ugu yaraan hal mar usbuucii, isagoo galaya kana baxa Manhattan isagoon dareen badan soo jiidan.
Meeshu maaha sidii uu uga tagay. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalihii mudada dheer ka shaqeynayay ayaa ka tagay. Sidoo kale waxaa la mid ah xubnaha qoyska ee mar wada shaqeeyey iyo qaar ka mid ah waxyaabaha meesha ka jira, sida qareenkiisii ​​hore Michael D. Cohen,
oo tan iyo markii ay u soo jeesteen
. Mudane Trump wuxuu ka shaqeeyaa halkaas, inta badan kaligiis, wuxuu la shaqeeyaa laba caawiye iyo rag yar oo ku jira liiska.
Hawlgalkiisa siyaasadeed ayaa sidoo kale lagu soo koobaykoox motley ah oo la taliyayaal hore ah oo wali ku jira mushaharkiisa, oo xusuusinaya astaamaha halyeeyada ah ee ka caawiyay neophyte siyaasadeed inuu gaaro guushiisa aan la fileynin ee 2016. Intooda badan waxay aadaan maalmo ama toddobaadyo iyaga oo aan la kulmin Mr. Trump shaqsi ahaan.
Laakiin inta uu ku sii jeedo shirwaynaha Jamhuuriga North Carolina habeenka Sabtida, waxa loogu yeerayo dib u bilaabida isu soo baxyada iyo khudbadaha, Mudane Trump labaduba waa qof hoos udhacay isla markaana aad ugu weynaaday joogitaanka nolosha Ameerika, oo leh cajiib - iyo inbadan Mudane khatar ku dheh - labiska xisbigiisa.
Xitaa iyada oo uusan laheyn taleefannada gacanta ee uu jecel yahay iyo feerka xafiiskiisa, Mudane Trump wuxuu dul wareegayaa masraxa siyaasadda, taasoo ay horseed u tahay beenta ah inuu ku guuleystay doorashada 2020 iyo xanaaqiisa guuldarradiisa. Oo wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale cabashada, wuxuu awooday inuu ku soo rogo xanaaqiisa iyo nooca uu jecelyahay ee xaqiiqda xisbi weyn.e oo ka mid ah dadka wax dooranaya ee Mareykanka - oo leh awood uu saameyn ku yeesho siyaasadda dalka iyo daciifinta kalsoonida lagu qabo doorashadiisa sanadaha soo socda.
Weli waxaa lagu xayiray Twitter iyo Facebook
, wuxuu ku dhibtooday inuu raadso hab lagu saameyn ku yeesho tabinta warbaahinta tan iyo markii uu dhoofay isla markaana dhiirrigeliya sameynta in doorashadii 2020 laga xaday isaga. Iyadoo la tixraacayo markii Mr. Trump aan la iska indha tiri karin
. Kuwa kale, sida Senator Rick Scott oo reer Florida ah, waxay isku dayeen inay ka raali noqdaan iyagoo u soo bandhigaya Mr. Trump
abaalmarino la alifay oo lagu faani karo hankiisa Michael Beschloss, oo ah taariikhyahan taariikhiyada madaxweynenimada, ayaa sheegay in Mr Trump uu ka horyimid qaabka madaxweynayaashii hore ee doorashada looga adkaaday oo u muuqda inay baaba'aan , iyo khibradahatii Richard M. Nixon, oo loola dhaqmay sidii qof la ceyriyo madaama Mr Trump uu ka maagay.
Dhanka isku dheelitirka iyo dhererkaba, Mr. Beschloss wuxuu yiri, "Wuu dheeryahay hadii qiyaasta intaas siyaasiyiintu way ka baqaan, taas oo ah cabirka awooda Washington. Madax badan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ka baqaya oo u sujuudaysa.
Jason Miller, oo ah lataliyaha madaxweynihii hore, ayaa ogolaaday in Mr Trump uu maamulo xisbiga.
" Waxaa jira laba Noocyada Jamhuuriga ee ku jira wadada giraanta, "Miller ayaa yidhi." Kuwa xaqiiqsada in madaxweyne Trump uu yahay hogaamiyaha xisbiga Jamhuuriga iyo kuwa beeninaya.
Xitaa guuldarada, Mudane Trump ayaa wali ah ninka ugu cadcad ee Magacaabista madaxweynenimo ee Xisbiga Jamhuuriga sanadka 2024 dhamaan codbixinta dadweynaha ilaa iyo hada.Xildhibaanada ka horyimid awoodiisa xisbigiisa, sida Rep. Liz Cheney, oo Jamhuuriya u dhalatay Wyoming oo ka codsatay asxaabteeda inay diidaanr ka dib rabshadihii 6-dii Janaayo ee taageerayaashiisa ee Capitol Hill,
waxaa bilaabay hoggaanka Jamhuuriga.
Laga soo bilaabo qariibnimadiisa laba-laabka ah ee faa'iido la'aanta iyo xukunka, Mudane Trump s wuxuu diiradda saarayaa seddex arimood - sheegashooyinkiisa beenta ah ee soo noqnoqday ee ahaa in doorashadii 2020 ay ahayd "mid la musuqmaasuqay" iyo taageeridiisa dadaalada la isku dayayo in lagu rogo natiijooyinka; weydiimaha gobolka iyo kuwa maxalliga ah ee ku saabsan dhaqamada Ururka Trump; iyo gobolka ganacsigiisa.
Mudane Trump, oo saraakiisha Aqalka Cad ay si farxad leh u daawanayeen taageerayaashiisa oo ku qulqulaya xarunta baarlamaanka iyo carqaladeynta shahaadada 6-da Janaayo ee codeynta Kulliyadda Doorashada, wuxuu u sheegay dhowr qof inuu u maleynayo in "dib loogu soo celin karo" Aqalka Cad bishii Agoosto, sida uu sheegay saddex qof oo aqoon u leh ereyadiisa Wuxuu ka dhawaajiyay aragti ay soo saareen taageerayaashiisa sida Mike Lindell, madaxa fulinta MyPillow, iyo Sidney Powell, oo ah qareenka uh.dacwad ka dhan ah sumcad dilista shirkadaha mashiinka doorashada si ay u faafiyaan fikradaha shirqoolka ah ee ku saabsan badbaadada codadkooda.
Guusha Madaxweyne Biden, oo leh in ka badan 80 milyan oo cod, waxaa ansixiyay Koongaraska mar rabshadii 6-dii January. Ma jiro qaab sharci ah oo dib loogu soo celiyo madaxweyne, dadaalada xubnaha Jamhuuriga ee aqalka Senate-ka Arizona ee ku aaddan dib u tirinta codadka gobolka ugu weyn gobolka waxaa ku jees jeesay inay yihiin been iyo wax aan macquul aheyn saraakiisha jamhuuriga ee maxalliga ah, oo leh natiijada ayaa ah goob goos goos ah oo ah kala dhantaalida kalsoonida doorashada.
Si kastaba ha noqotee, Mudane Trump wuxuu diirada saaray dadaalkii Arizona iyo tijaabadii Georgia si uu ugu adkeysto xaqiiqda ah in kaliya aan dib loo soo celin doonin, laakiin Jamhuuriyeyaashu sidoo kale waxay dib u heli doonaan aqlabiyadda Golaha Senate-ka isla dadaalkaas, sida laga soo xigtay dadka aqoonta u leh waxa uu yidhi.a>
Taageerayaasha Mr. Trump ayaa banaanbax ka dhigay banaanka xafiiska doorashada Dallas County ee Dallas bishii Nofeembar.
Amaah ... Taamir Kalifa ee Hfrance.fr
Wuxuu ku booriyay faallooyinka muxaafidka ah iyo qorayaasha inay ku cabiraan sheegashooyinkiisa ah in doorashada lagu shubtay Dareenkiisa ayaa sii xoogeystay todobaadyadii la soo dhaafay, kuna soo beegmay dastuurka garsooraha gaarka ah ee qaaska ah oo uu qoray Cyrus Vance Jr., oo ah xeer ilaaliyaha degmada Manhattan, meheraddiisa. warsaxaafadeedyada wali ugu yeera "Madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka." iyo xaaskiisa, "ayuu ku yiri hadal uu soo saaray jimcihii ka dib Facebook ayaa ku dhawaaqay inay sii wadi doonto mamnuucida ay saartay isaga ugu yaraan labo sano
. Waxay noqon doontaa dhammaantoodganacsi! "
usbuucii la soo dhaafay, wuxuu xiray bogiisa ka dib markii uu ka maqlay asxaabtiisa in barta ay soo galeyso taraafiko yar kana dhigeyso mid yar oo aan meesha ku jirin, sida uu sheegay qof yaqaan fikradihiisa. Qaar ka mid ah kaaliyeyaashiisa ayaan rabin inay kala hadlaan aragtidiisa shirqoolka ah waxayna jeclaan lahaayeen inay arkaan isaga oo taageeraya ajandaha mustaqbalka fog ee caawin kara Jamhuuriyeynta sanadka 2022. Dadka ku hareeraysan ayaa ku kaftamay arintaas. Lataliyihii ugu sareeyay ee hogaamiyaha aduunka xorta ah waa Christina Bobb, oo ah midigta-midig, oo si joogta ah u taageerta Trump One America News Network, oo ay si joogto ah ula tashato si ay u hesho macluumaad ku saabsan hantidhawrka doorashada ee Arizona. waxa uu ka yiraahdo doorashada 2020 marka uu ka soo muuqdo North Carolina. Mudane Trump wuxuu aad u xiiseynayey inuu makarafoonka ka qaado habeenka Sabtida Greenville, halkaasoo kaaliyeyaashu sheegeen inuu qorsheynayo inuu weeraro Dr Anthony S. Fauci,khabiirka ku takhasusay cudurada faafa ee dalka, iyo sidoo kale maamulka Biden Shiinaha si ay u bixiyaan magdhawga canshuur bixiyaha Mareykanka. Jamhuuriyiinta taageerta ajendihiisa, lataliyayaashu waxay yiraahdeen madaxdu waa Diamond iyo Silk, xiddigaha warbaahinta bulshada ee dhaqdhaqaaqa MAGA, iyo Dinesh D'Souza, oo cafis madaxweyne ka helay Mr. Trump dambi culus oo lagu soo oogayHilibyada sharci darrada ah ee doorashada.
In kasta oo dabeecadda suubban ee dhacdooyinka qaarkood uu doonayo inuu magaciisa la xiriiro, xitaa qaar ka mid ah kuwa wax u dhimaya ayaa ugu neceb inay iska indhatiraan. wuxuu ahaa ilko xaddidan, waxay ahayd wax lagu qoslo, ”ayuu yidhi Bill Kristol, oo ah muxaafid caan ah oo ka tirsan" Marna Trump ". "Kayntu waxay ka maqan tahay geedaha si aan loo arag sida ay u xoog badan tahay." Tixgelinta golaha guurtida ee cod bixinta gobolka ugu weyn gobolka.
Courtney Pedroza ee Hfrance. > Labadiisii ​​maareeye ee ololihii 2020, Bill Stepien iyo Brad Parscale, waxay ku jiraan mushaharka Mr. T oo wali adduunkiisa ku lug leh. Laakiin Mr. Trump wuxuu si cadho leh ula cadhooday inta badan kooxdiisa. Markan, Jared Kushner, oo uu sodog u yahay oo kormeerayay hawlgalkiisaOlolaha ololaha, inta badan waa la tuuray, wuxuu u sheegayaa wareegga yar ee lataliyayaasha ku hareeraysan madaxweynihii hore inuu doonayo inuu diirada saaro qorista buugiisa iyo dhisida xiriir fudud oo lala yeesho Mr. sharciga. Donald Trump Jr wuxuu noqday qofkii ugu siyaasada badnaa uguna mashquulsanaa qoyska aabihiis. mar labaad sannadka 2020, wuxuu kormeerayaa hawlgallada lacag ururinta ee Mr. Trump ee ka socda Florida, isagoo hagaya wicitaanka toddobaadlaha ah ee kooxda qalfoofka oo weli hoggaamiya hawlgalka degenaanshaha ka dib. koorsada Bedminster, NJ, labadaba gudigiisa waxqabadka siyaasada iyo musharaxiinta jamhuuriga.
Laakiin wuxuu u dulqaadan waayey la wareegida qabanqaabada kulanka.mblements, isagoo ku dhawaaqaya gobolada uu qorsheynayay inuu booqdo ka hor inta aysan kooxdiisa dhameystirin goobaha ama taariikhaha. "Haddii aad madaxweyne tahay muddo, inta badan si aamusnaan ah ayaad habeenkii oo dhan u socotaa," ayuu yiri Douglas Brinkley, taariikhyahan madaxweyne. Wuxuu isku tiriyaa inuu yahay hogaamiyaha kacaanka, wuxuuna ku sameeyaa gadaasha gaariga golf-ka. ”
Maxaa muhiim ah: bisha juun ee farxada leh. waa tan sheekada fasaxa Mareykanka
2021-06-18 00:51:43 | Siyaasadda
Waan jeclahay ciidaha, sidaa darteed abuuritaanka dabaaldeg cusub oo federaal ah - Juun 19 ama Juun 19 - waxay iga dhigtay inaan fiiriyo siday ku yimaadeen Mareykanka. ...
Joe Manchin iyo Codkii sixirka 50aad ee Xeerka Codbixinta Dimuqraadiyiinta
2021-06-18 00:22:00 | Siyaasadda
Dimuqraadiyiintu waxay ogyihiin in dib-u-habeynta doorashadooda aysan fursad helin inta carqaladeyn jirto, laakiin waxay jecel yihiin inay muujiyaan in waxa ka hor istaagaya ay yihiin Jamhuuriyeyaasha. ...